Xildhibaan furaya gal-dacwadeed ka dhan ah Farmaajo iyo Fahad | KEYDMEDIA ONLINE
15 September 2021 Liiska musharraxiinta Somaliland oo aan weli faro lagu heyn
Xildhibaan furaya gal-dacwadeed ka dhan ah Farmaajo iyo Fahad
Guddoomiye ku xigeynka koobaad Aqalka Sare, Abshir Maxamed Axmad, ‘Bukhaari’ ayaa sheegay in hannaanka qorista ciidanka loo qaaaday Eritrea loo maray qaab qarsoodi oo ka baxsan xayndaabka nidaamka ciidan qorista ee dastuuriga ah sida ku cad Qod.27aad.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiye ku xigeynka koobaad Aqalka Sare, Abshir Maxamed Axmad, ‘Bukhaari’ oo War-saxaafadeed ka soo saaray, arrinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee Farmaajo ka dagaal galiyay waqooyiga Itoobiya, ayaa sheegay inuu hoggaamin doono dadaal lagu raadinayo xuquuqda askarta maqan.
“Waxaan hoggaaminayaa dadaal lagu raadinayo xuquuqda ubadkaas Soomaaliyeed aniga oo qoraal rasmi ah u gudbin doona Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka kana codsan doona in la furo kiis lagu baarayo laguna ogaanayo xaaladda ilmahaasi iyada oo la qaadayo dhammaan tallaabooyinka uu sharcigu tilmaamay”. Ayuu yiri Abshir Bukhaari.
Sanatarkii ugu horreeyay ee dalku yeeshu, wuxuu xusay in qof kastaa uu xaq u leeyahay in uu helo macluumaadka ay Dawladdu hayso, “Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay helitaanka macluumaadka ay cid kale hayso oo loogu baahan yahay in lagu fuliyo ama lagu ilaaliyo xuquuq kastoo kale oo daw loo leeyahay”. Ayuu sidoo kale yiri Bukhaari.
Guddoomiye ku xigeynka Aqalka Sare, wuxuu shaaca ka qaaaday in dhammaan ciidanka la qaaday loo qoray si qarsoodi ah, lagana dhaadhiciyay in loo qadayo dalka Qatar, taas oo sababtay in xitaa qaar ka mid ah waalidiinta laga qaado lacag si ilmahooda loogu daro ciidanka la qaadayay.
Warbixin maanta ka soo baxay Golaha Xuquuqul Insaanka ee Hay’adda Qamadada Midoobay, ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaalida laga qaaday xeryaha ay tabobarka ku qaadanayeen lana geeyay goobaha dagaalka ee Gobolka Tigray iyaga oo la socday ciidamada Ereteriya.
Nidaamka Farmaajo ee waqtigiisu dhacay ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koray sidii ay u marin habaabin lahaayeen sax ahaanshiyaha arrinkaan, waxayna dhowr jeer oo kala duwan ku celceliyeen in ciidamo tababar loo qaaday oo ka dagaalamay Itoobiya aysan jirin,
Bashiir Raage Shiiraar oo ku geeriyooday Muqdisho
Warar 17 September 2021 11:17
Waxaa geeridiisa la xaqiijiyay Allah u naxariistee Ganacsade Bashiir Raage Shiiraar mid kamid ah hoggaamiye kooxeedyadii ugu caansanaa Muqdisho.
Warar 17 September 2021 8:39
DG-yada oo war ka soo saaray khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Warar 17 September 2021 8:16
Warar 16 September 2021 22:35
Waraaqdan, ayaa ku soo aadday xilli, ay shalay iyo xalay iska soo dababaxeen bayaanno ay soo kala saareen Xaafiiska Farmaajo iyo RW Rooble, kuwaas oo isaga soo hor jeeday si adag.